I-china izingubo ezilahlayo ezilahlwayo, Ukwenziwa okungeyona oyinyumba kanye neFektri | Jingzhao
Imodeli: ingcezu eyodwa yengubo ngaphandle kwesembozo sezicathulo
Incazelo: s, m, l, XL, XXL, XXXL
Isetshenziswa ngabasebenzi bezokwelapha ezikhungweni zezokwelapha ukuvimbela ukudluliselwa kwegciwane kusuka ezigulini kuya kubasebenzi bezokwelapha abanomoya noma uketshezi.
Ukusebenza komkhiqizo nokwakheka kwesakhiwo:
Lo mkhiqizo ubunjwe ngophawu olufakwe phezulu, amabhulukwe, umugqa wenjoloba kanye nelogo yangemuva yekhola. Yenziwe kakhulu ngendwangu yesisindo se-polyethylene ephezulu, eyenziwe ngesakhiwo seHooded one-piece futhi savalwa ngomugqa wenjoloba.
1. Sicela ukhethe futhi uqinisekise imodeli yokuvikela ngaphambi kokuyisebenzisa.
2. Izingubo zokuzivikela ezifanele usayizi wakho kufanele zikhethwe ngokuya ngesimo sakho.
3. Gqoka izingubo zokuzivikela ukuqinisekisa ukuthi unogada uvaliwe esesimeni esihle. Sicela unqume ukuthi uzogqoka yini
ezinye izinto zokuvikela njengoba kudingeka. Uma isihlakala sobuso, isandla / unyawo nokunye ukuvuleka kuvaliwe nge-tape, umphumela wokuvikela uzoba ngcono.
Ukuqapha, izexwayiso nokuqukethwe okuyela ngasocansini:
1. Sicela ufunde imanuwali kahle ngaphambi kokuyisebenzisa.
2. Ngaphambi kokusetshenziswa, sicela ulandele ngokuqinile ukusetshenziswa nemikhawulo yokusebenzisa okokuvikela okokuvikela okuphezulu kakhulu i-polyethylene fiber indwangu yenjoloba. Abasebenzisi kufanele bahlulele ukuthi ingabe umkhiqizo uzilungele ngokwabo yini izikhathi ezithile. Uma izikhathi zokusebenzisa zidlula ukusetshenziswa kanye nemikhawulo yokusebenzisa umkhiqizo, asenzi siqinisekiso salokhu, noma sithathe noma yimuphi umthwalo ohlobene nalokhu.
3. Sicela ugweme ilanga eliqondile.
4. Lo mkhiqizo uncibilika ku-135 ℃, sicela ugcine kude nomthombo wokushisa bese uvulela umlilo lapho usebenzisa.
5. Lo mkhiqizo uyalahlwa. Sicela uyiphathe ngokuya ngezidingo zemithetho yokuvikela ukuphepha kokuvikela emva kokusetshenziswa.
6. Akuvunyelwe kulabo abaphikisana nendwangu ye-polyethylene.
7. Lo mkhiqizo uyiphakethe elinenzalo. Uma iphakethe lonakele, sicela ungayisebenzisi. Ngaphambi kokugqoka, sicela uhlole izingubo zokuvikela ngokubukeka. Uma kukhona umonakalo, ukushintsha kombala, ukungcola nezinye izimo, sicela ungakugqoki.
8. Umkhiqizo ngeke usetshenziswe ngaphezu kwesikhathi sokusebenza.
Usuku lokuqala ukusebenza: kuphela ukusetshenziswa ngesikhathi esiphuthumayo sesifo
Usuku lokukhiqiza / i-batch No.: bheka ilebula
Izimo zokugcina nokuhamba: sicela ugweme ilanga eliqondile futhi ugcine ekamelweni lokushisa endaweni epholile futhi eyomile.
Incazelo yamalebula, izimpawu, izimpawu, izifinyezo, njll
Igama lomuntu obhalisile / umkhiqizi: I-Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd.
Amadivayisi: Cha. 318, Gong Ye 1LU (South), Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang, JiangXi, China.
Langaphambilini Izingubo zokuhlukanisa ezilahlwayo
Olandelayo: Izingubo zokuhlinza ezingezona ezilahlwayo